दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २४ गते आइतबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १० - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
मेष : तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। तपाईँको आशा अनुसार पैसाको लाभ हुनेछैन। साना बच्चाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछन् र आनन्दित गराउनेछन्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। तपाईंको सञ्चार प्रविधी र काम कौशल प्रभावशाली हुनेछ। लामो समय पछि, तपाईंलाई आफ्नो जीवन साथीसँग खर्च गर्न प्रशस्त समय प्राप्त हुनेछ।
वृष : तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधार गर्ने कामहरूको लागि प्रशस्त समय हुनेछ। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। आँखाले कहिल्यै झूठ बोल्दैन र आफ्नो साथीको आँखाले तपाईंलाई साँच्चै आज केहि विशेष भन्नेछन्। घरमा संस्कार, हवन, शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
मिथुन : तेल र मसालादार आहार नगर्नुहोस्। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस्, कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो सोख गरेर साथै परिवारका सदस्यहरूलाई मद्दत गरेर केही समय बिताउन सक्नु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आज, आफ्नो साथीले तपाईंलाई आफ्नो रमाइलो पक्ष देखाउन सक्छ।
कर्कट : वाहन चलाउँदा र विशेष गरेर घुमाउरो बाटोमा होसियार हुनुहोस्। कसैको लापरवाहीले तपाईंलाई समस्यामा पार्न सक्छ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस्, तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। तपाईं संगै बस्ने कोई आजको तपाईंको हालको नराम्रा कार्यहरूले रिसाउनेछ। रायको भिन्नताले व्यक्तिगत सम्बन्ध तोडिन सक्छ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईंको जोडीले नभएको वैवाहिक जीवन बारेमा तपाईंलाई परेशान गर्न सक्छन्।
सिंह : तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको आशा पूरा गर्न सक्ने छैनन्। तिनीहरूलाई तपाईंको ढड्डी र लहडी पारामा काम गराउने आशा नगर्नुहोस्, बरु शैली परिवर्तन गराउने प्रयास गर्नुहोस् । तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
कन्या : तपाईंको मनलाई अनावश्यक विचारहरूले कब्जा गर्न सक्छन्। खाली मस्तिष्क शैतानको कार्यशाला हुने हुनाले शारीरिक व्यायामहरूमा आफूलाई संलग्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। तपाईंको अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमताले राम्रो लाभांश प्राप्त हुनेछ। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
तुला : तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीको न्यानो माया महसुस गर्नु हुनेछ।
वृश्चिक : मुस्कान अविरल रूपमा तपाईंको अनुहारमा हुने र अपरिचित पनि परिचित जस्तो लाग्ने दिन। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। तपाईंले परिवारमा शान्तिनिर्माताको जस्तै काम गर्नुहुनेछ। समस्याहरू नियन्त्रणमा राख्न सबैको समस्या सुन्नुहोस्। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
धनु : तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरूले सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। तपाईंको साहसले प्रेमलाई जीत्नेछ। तपाईंसँग राय मागे नलजाइकन दिनुहोस् किनभने यसको लागि तपाईंको अत्यधिक कदर गरिनेछ। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
मकर : व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। तपाईंको अव्यावहारिक योजनाले धनको कमी गराउनेछ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ, त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो । तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : आफ्नो साँचो क्षमता महसुस किनकि तपाईंमा बलको कमी छैन तर इच्छाको कमी छ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्‍याउनेछ। नयाँ पारिवारिक उद्यम सुरु गर्न शुभ दिन। यस दिन धेरै सफलता गर्न अन्य सदस्यहरूको मद्दत लिनुहोस्। तपाईंले के के गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो प्रेमीसँग भन्नुभयो भने गम्भीर समस्या हुनेछ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
मीन : आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। रोमान्सको लागि आज एकदम जटिल जीवन। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। दिनमा गरम तर्क गरेपछि, आफ्नो जोडीसित रमाइलो साँझ बिताउनु हुनेछ।